ပို့ကုန်သွင်းကုန်အထောက်အပံ့ - WorldRef
မလိုအပ်သောလိုင်စင်မရှိသလား။ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရပ်တန့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆုံးနှင့်အတူစိတ်မပူပါနဲ့
ဒေသခံကျွမ်းကျင်သူများထံမှပြည့်စုံသောယုံကြည်စိတ်ချရသောအထောက်အပံ့ဖြင့်သင်၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပို့ကုန် - သွင်းကုန်လုပ်ငန်းအားလုံးကို Derisk လုပ်ပါ။
အာဏာပိုင်များနှင့်ထိရောက်စွာဆက်ဆံခြင်းအတွက် ဦး ဆောင်သည့်ပထဝီဝင်နယ်မြေများအလိုက် Custom House Agent ကွန်ယက်ကိုအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောပို့ကုန် - သွင်းကုန်စာရွက်စာတမ်းများကိုပြုပြင်ခြင်းအတွက်အထူးအကူအညီ။
အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုမည်သည့်နေရာတွင်စတင်တင်ပို့ရမည်ကိုမသိကြကြောင်း၊ အသေးစားတင်ပို့သည့်ကုမ္ပဏီများသည်တင်ပို့သည့်ကုမ္ပဏီအားလုံး၏ ၉၈% ရှိသည်။ (အသေးစားစီးပွားရေးတင်ပို့မှုစစ်တမ်း - Livingstone, 98)
Exim န်ဆောင်မှုများ သငျသညျကို Global သွားရန်အတားအဆီးအားလုံးဖယ်ရှားပစ်ရန်ဒီဇိုင်း။
အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး & ပွဲစား
ဆိပ်ကမ်း Liasoning & ကိုင်တွယ်
ကုန်သွယ်ရေး & အကောက်ခွန်အကြံပေး
သင်၏ပို့ကုန် - သွင်းကုန်ကိုချွေတာစေရန်ဆိပ်ကမ်းဝန်ဆောင်မှု
ပံ့ပိုးမှုတင် / ချ
လှေ / ထိန်တင်ခြင်း
Surveying & Forwarding
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု Surveying & Forwarding
ပို့ကုန် - သွင်းကုန်ဘဏ္FINာရေး
Ex-Im Financing Solutions နှင့်အတူကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးကိုမြှင့်တင်ရန်
WorldRef မှ Ex-Im အထောက်အပံ့ကိုရပ်တန့်ရန်အဆုံးသတ်သေချာစေပါ။
ဒုတိယသမ္မတ - စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ PT Juhdi Sakti
WorldRef သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးနယ်ပယ်အသီးသီးမှလူငယ်ပညာရှင်များကစီမံခန့်ခွဲသည်။ မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများအပေါ်သူတို့၏တုန့်ပြန်မှုများသည်အသုံး ၀ င်ပြီးယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် WorldRef အား၎င်း၏စီးပွားရေးကိုကမ္ဘာအနှံ့တိုးချဲ့စေလိုသည်။
Disover တီထွင်ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများ အကောင်းဆုံးဖြစ်စဉ်များ, ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်နည်းပညာများနှင့်အတူ။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္inမှဗီယက်နမ်နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများသည်ပို့ကုန်မှရရှိသောဝင်ငွေ၏ ၇၄ ရာခိုင်နှုန်းကိုရရှိကြသည်။ နောက်မလေးရှား (၆၈%)၊ မက္ကဆီကို (၅၄%)၊ တရုတ် (၄၈%)၊ အင်ဒိုနီးရှား (၄၃%)၊ ထိုင်း (၃၈%)၊ 74%) နှင့်အိန္ဒိယ (68%) ။ (* ၂၀၁၁-၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းအစီရင်ခံစာ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်)
သင်ကစာရွက်စာတမ်းများ / ထုတ်ကုန်လိုက်နာမှုလက်မှတ်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်မလား?
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည် ၀ ယ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများအားအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးနှင့်လိုင်စင်အထောက်အပံ့များဖြင့်ထောက်ပံ့မှုအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးသင်ကခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဖွင့်နိုင်သည်။
အလှည့်ကျအချိန်သည်တိုင်းပြည်နှင့်အခြားထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ငါတို့နှင့်စကားပြောပါ ပိုမိုသိရန်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်အခကြေးငွေသည်သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်ပို့ကုန် / သွင်းကုန်နိုင်ငံပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကျေးဇူးပြု ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်လိုအပ်ချက်ပြောပြပါ ငါတို့သည်သင်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ပေးပါလိမ့်မယ်။
အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုတင်ပို့နိုင်ရန် WorldRef ကမည်သို့ကူညီသနည်း။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် WorldRef သည်ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရန်ပုံငွေဖြင့်ဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ အသေးစိတ်အတွက်၊ သင်လည်ပတ်နိုင်သည် ပို့ကုန် - သွင်းကုန်ဘဏ္Financeာရေး သို့မဟုတ်ပဲ ငါတို့နှင့်စကားပြောပါ.
လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြု၍ အမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ခြင်းကိုရယူပါ။ ယနေ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုတောင်းဆိုပါ.
သေချာတာပေါ့, ငါတို့သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု။ သို့မဟုတ်ပါ ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်လိုအပ်ချက်ပြောပြပါ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများအတွက်တိုက်ရိုက်။